မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် Document အပြည့်အစုံဖြင့်တင်ပြရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်များ | Myanmar Seed Information Portal
Home » Content » မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် Document အပြည့်အစုံဖြင့်တင်ပြရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်များ
မျိုးသစ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် Document အပြည့်အစုံဖြင့်တင်ပြရာတွင်လိုအပ်သည့်အချက်များ
လျှောက်လွှာပုံစံ (Form 3) တွင်ပြည့်စုံစွာဖြည့်ရန် (ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပါဝင်သည့် တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ၏လက်မှတ်ဖြင့်)
မျိုးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူ၏ အပြည်အဝတာဝန်ယူကြောင်း ဝန်ခံကတိဖြင့်တင်ပြရန်
ရယူခဲ့သောနိုင်ငံမှ အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိသူ လက်မှတ်ထိုးဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တရားဝင် မျိုးသစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လျှောက်ထားခွင့်ပြုကြောင်း၊ စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုကြောင်းစာ /သဘောတူညီမှု
မျိုး၏မိဘလိုင်းမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံချက်ကို ရယူခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှ တာဝန်ရှိသူ၏လက် မှတ်ဖြင့်တင်ပြရန်
လျှောက်ထားလာသည့်မျိုး၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအား အောက်ပါအချက်အလက်များအတိုင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်
- ပန်းခိုင်အမျိုးအစား (အဆုံးရှိပန်းခိုင်/အဆုံးမရှိပန်းခိုင်)
- ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပန်းပွင့်ရက်
- အသီး/အရွက်(အရောင်/အလျား/အထူ/လုံးပတ်/အလေးချိန် စသည်ဖြင့်….)
- အသီးတစ်လုံးအလေးချိန် (ဂရမ်)
- ဗီဇပြုပြင်ထားသောသီးနှံ ဟုတ်/မဟုတ်
လျှောက်ထားလာသည့် မိဘလိုင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများအား အောက်ပါ အချက်အလက်များအတိုင်းထည့်သွင်း ဖော်ပြရန်
- ပြင်ပရုပ်သွင် လက္ခဏာများ
- အပင်ပေါက်အဆင့် (Hypocotyl colar, cotyledon leaf color and shape etc.)
- အပင်အမျိုးအစား ( plant type (determinate/indeterminate), stem shape, stem color, stalk, node, internode, branching habit, plant growth habit (erect/bush),matured leaf size( leaf vein, compound etc.), leaf shape, leaf color etc.)
- ပန်းခိုင်အမျိုးအစား (flower color, anther color, flower position etc.)
- အသီးပုံစံ (fruit color, size, shape, length, width etc.)
- အထွက်နှုန်း (no of fruit per plant, 100 seed weight, seed per gram, seed weight per gram)
သီးနှံကြီးထွားမှုအဆင့်အလိုက် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံဖြင့် တင်ပြရန်